यूहन्ना १३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१३ अब निस्तार-चाडअघि येशूलाई थाह थियो, आफू यस संसारबाट निस्केर बुबाकहाँ जाने बेला आइसकेको छ। त्यसैले यस संसारमा भएका आफ्नाहरू, जसलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई अन्तसम्मै प्रेम गरिरहनुभयो। २ तब साँझको भोज चलिरहेको थियो। यतिन्जेलसम्ममा दियाबलले सिमोनको छोरा यहूदाको मनमा उहाँलाई धोका दिने विचार हालिदिइसकेको थियो। ३ अनि येशूलाई पनि बुबाले सबै कुरा आफ्नो हातमा दिइसक्नुभएको छ र आफू परमेश्वरबाट आएको हुँ अनि परमेश्वरकहाँ नै जाँदैछु भनी थाह भइसकेको थियो। ४ त्यसैले खाइरहेको ठाउँबाट उहाँ उठ्नुभयो र आफ्नो खास्टो छेउमा राख्नुभयो अनि एउटा तौलिया लिएर कम्मरमा बेर्नुभयो। ५ त्यसपछि उहाँले एउटा बाटामा पानी हाल्नुभयो अनि चेलाहरूको खुट्टा धुन र आफूले बेरेको तौलियाले पुछ्न थाल्नुभयो। ६ अनि जब उहाँ सिमोन पत्रुसकहाँ पुग्नुभयो, तब तिनले उहाँलाई भने: “प्रभु, तपाईंले मेरो खुट्टा धुने?” ७ येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो: “म के गर्दैछु, त्यो तिमी अहिले बुझ्दैनौ तर यी कुराहरू भइसकेपछि बुझ्नेछौ।” ८ पत्रुसले उहाँलाई भने: “तपाईंले कुनै हालतमा मेरो खुट्टा धुन मिल्दैन।” येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “मैले धोइदिइनँ भने तिम्रो मसित केही भाग हुनेछैन।” ९ सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने: “प्रभु, मेरो खुट्टा मात्र होइन तर मेरो हात र टाउको पनि धोइदिनुहोस्।” १० येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “जसले नुहाइसकेको छ, ऊ पूरै सफा भएकोले उसको खुट्टा मात्र धोए पुग्छ। अनि तिमीहरू पनि सफा छौ तर सबै जना त होइन।” ११ कसले उहाँलाई धोका दिनेछ भनी उहाँलाई राम्ररी थाह थियो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो: “तिमीहरू सबै त सफा छैनौ।” १२ तिनीहरूको खुट्टा धोइसकेपछि उहाँले आफ्नो खास्टो ओड्नुभयो र फेरि टेबुलमा बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले तिमीहरूका निम्ति के गरें, तिमीहरूलाई थाह छ? १३ तिमीहरू मलाई ‘गुरु’ र ‘प्रभु’ भन्छौ। तिमीहरूले ठीकै भनेका हौ, किनकि म त्यही हुँ। १४ यदि प्रभु र गुरु भएर पनि मैले तिमीहरूको खुट्टा धोएँ भने तिमीहरूले पनि एक-अर्काको खुट्टा धुनुपर्छ। १५ मैले तिमीहरूका लागि नमुना बसालेको हुनाले मैले तिमीहरूका निम्ति जे गरें तिमीहरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। १६ तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, दास आफ्नो मालिकभन्दा ठूलो हुँदैन, न त पठाइएको व्यक्ति उसलाई पठाउनेभन्दा ठूलो हुन्छ। १७ तिमीहरूलाई यी कुराहरू थाह छ, त्यसैले यी कुराहरू गर्छौ भने तिमीहरू आनन्दित हौ। १८ तिमीहरू सबैको विषयमा मैले यो कुरा भनेको होइन, किनकि मैले रोजेकाहरूलाई म चिन्छु। तर धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुरा पूरा होस् भनेर यसो भएको हो: ‘जसले मेरो रोटी खान्थ्यो, उसैले मलाई लात हान्न खुट्टा उचालेको छ।’ १९ अब यी कुराहरू हुनुअघि नै म तिमीहरूलाई भन्दैछु, ताकि जब यी कुराहरू हुन्छन्‌, तब म उही हुँ भनी तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। २० तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, जसले मैले पठाएको व्यक्तिलाई स्वागत गर्छ, उसले मलाई पनि स्वागत गर्छ। अनि जसले मलाई स्वागत गर्छ, उसले मलाई पठाउनुहुनेलाई पनि स्वागत गर्छ।” २१ यी कुराहरू भनिसकेपछि येशू अत्यन्तै विचलित हुनुभयो* र यसरी खुलस्त भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, तिमीहरूमध्ये एक जनाले मलाई धोका दिनेछ।” २२ यो कुरा उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको होला भन्ने नबुझेर चेलाहरू एक-अर्कालाई हेराहेर गर्न थाले। २३ उहाँका चेलाहरूमध्ये एक जना, जसलाई येशू प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, तिनी येशूको छेवैमा अडेस लगाएर बसिरहेका थिए। २४ त्यसकारण मुन्टो हल्लाएर इशारा गर्दै सिमोन पत्रुसले तिनलाई भने: “उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको हो, हामीलाई भन न।” २५ त्यसैले येशूको छातीमा अडेस लाग्दै तिनले सोधे: “प्रभु, कसले?” २६ त्यसकारण येशूले जवाफ दिनुभयो: “रोटीको टुक्रा चोपेर म जसलाई दिन्छु, उसैले।” त्यसपछि उहाँले रोटीको टुक्रा चोपेर सिमोन इस्करियोतको छोरा यहूदालाई दिनुभयो। २७ तिनले रोटीको टुक्रा लिएपछि सैतान तिनीभित्र पस्यो। त्यसकारण, येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “तिमी जे गर्दैछौ, झट्टै सिध्याइहाल।” २८ तथापि, उहाँले किन तिनलाई त्यसो भन्नुभयो, टेबलमा खान बसेकाहरूमध्ये कसैले पनि बुझेनन्‌। २९ वास्तवमा, कोही-कोहीले के भन्ठानिरहेका थिए भने यहूदाले पैसाको कन्तुर बोक्ने गरेकोले येशूले तिनलाई “चाडको लागि हामीलाई चाहिने कुरा किन” भन्नुभएको होला वा गरिबहरूलाई केही दिन अह्राउनुभएको होला। ३० त्यसकारण, रोटीको टुक्रा लिएपछि तिनी तुरुन्तै बाहिर गए। त्यसबेला रात परिसकेको थियो। ३१ तिनी बाहिर गइसकेपछि येशूले भन्नुभयो: “अब मानिसको छोरा गौरवान्वित भएको छ अनि ऊद्वारा परमेश्वर पनि गौरवान्वित हुनुभएको छ। ३२ अनि परमेश्वर आफैले मानिसको छोरालाई गौरवान्वित तुल्याउनुहुनेछ र उहाँले त्यो तुरुन्तै गर्नुहुनेछ। ३३ ए साना केटाकेटी हो, अब अलिक बेर म तिमीहरूसित हुन्छु। तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ तर मैले यहूदीहरूलाई भनेझैं अब म तिमीहरूलाई पनि भन्छु, ‘म जहाँ जान्छु, त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ।’ ३४ तिमीहरूलाई म एउटा नयाँ आज्ञा दिंदैछु, तिमीहरू आपसमा प्रेम गर; मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेजस्तै तिमीहरूले पनि आपसमा प्रेम गर। ३५ तिमीहरूले आपसमा प्रेम गऱ्यौ भने तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भनी सबैले यसैबाट थाह पाउनेछन्‌।” ३६ सिमोन पत्रुसले उहाँलाई सोधे: “प्रभु, तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?” येशूले जवाफ दिनुभयो: “म जहाँ जाँदैछु, मेरो पछि लागेर तिमी अहिल्यै त्यहाँ आउन सक्दैनौ तर पछि भने तिमी त्यहाँ आउनेछौ।” ३७ पत्रुसले उहाँलाई भने: “प्रभु, म किन अहिल्यै तपाईंको पछि लाग्न सक्दिनँ? तपाईंको लागि म आफ्नो ज्यानसमेत दिनेछु।” ३८ येशूले जवाफ दिनुभयो: “तिमीले मेरो लागि ज्यान* दिने? तिमीलाई म साँच्चै भन्छु, तिमीले मलाई तीन पटक तिरस्कार नगरेसम्म कुनै हालतमा भाले बास्नेछैन।”
^ यूह १३:२१ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ यूह १३:३८ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।